Lapho ungahamba khona ngoKhisimusi - World Tourism Portal
UKhisimusi ngumkhosi waminyaka yonke wokugubha ukuzalwa kukaJesu Kristu, owenziwa ngokuyinhloko December 25 njengomkhosi wenkolo namasiko phakathi kwezigidigidi zabantu emhlabeni jikelele. USuku lukaKhisimusi yiholide lomphakathi ezizweni eziningi zomhlaba futhi lugujwa ngokwenkolo yiningi lamaKristu, futhi ngokwesiko ngabaningi abangewona amaKristu, futhi liyingxenye ebalulekile yesikhathi samaholide egxile kulo.
Imikhosi iqala ngamaSonto amane ngaphambi kosuku olwandulela uKhisimusi oluphawula ukuqala kwe-Advent. Thumela i-Advent, iningi lamazwe amaKatolika nawo agubha uMkhosi weSt. Nicholas ngomhlaka 6th kaDisemba. Lokhu kungahle kungabi yisiko kuwo wonke amazwe kepha ezinye zezindawo ezinhle zokuchitha isikhathi sikaKhisimusi ziwugubha njengengxenye yesiko labo. Ngemuva komkhosi, umgubho oyinhloko ngophakathi kukaKhisimusi lapho abantu beya eMiseni Lesikhathi Sasemini futhi bejabulela ukudla okufudumeza inhliziyo imindeni yabo, nabangane.
Njengoba kuneqhwa elimboze ophahleni lwendlu, kuyathengiswa uKhisimusi, ukunambitheka kwesinamoni nezinkwa ze-ginger emoyeni, kanye nokugcwala kwezimakethe zikaKhisimusi ezinhle emhlabeni wonke; ngokungangabazeki kuzoba umbukiso omkhulu.
Isikhathi sikaKhisimusi siyeza! Izibani ezibomvu sezivele zihlobisa izihlahla; iqhwa lilindelwe emadolobheni amaningi amahle. Yonke indawo eya kuyo igqokwa ngemihlobiso yayo emihle kakhulu. Amabhola kaKhisimusi kanye nezibani zikaKhisimusi zikhanyisela izimakethe zothando lukaKhisimusi
UKhisimusi isikhathi sokuphumula nokucabangisisa ngempilo. Kuyajabulisa futhi, uma usigubha njengomndeni. Kuyithuba elihle lokuhlangana, njengoba nidla, zijabulise futhi nivule izipho ndawonye.
Uma ungavala amehlo akho futhi wenze isifiso sokuhamba, kungaba yini? Ingabe ziningi kakhulu izindawo ezikhunjulwa?
Ungacabanga kabili ngaphambi kokuchitha uhambo lukaKhisimusi… Ngabe uzizwa eChristmassy ngokwanele? Ngingahamba ngaphandle kwesidlo sakusihlwa sakusihlwa sikaKhisimusi? Ingabe ngizokwazi ukubhekana nokude kakhulu nasekhaya ngesikhathi samaholide? Empeleni kungaba enye yezindlela ezinhle kakhulu zokusebenzisa uKhisimusi oyohlala ukhumbula! Miningi iminyaka ongayichitha ngoKhisimusi ekhaya. Ungathathi izwi lethu ngakho, abanye babhulogi bethu abathandekayo bokuhamba babelana ngokukhohlwa kukaKhisimusi kwabo okukhohlakala kakhulu.
Ukuthatha indawo yakho elandelayo akulula, kepha kunendlela engcono kunokuphenya imbulunga enkulu, ukuvala amehlo akho bese ushaya umunwe phansi (kungahle kube sekupheleni kwe-Atlantic, ne-Wi-Fi kune-patchy, usho okuncane).
Sibheke uDisemba, inyanga yemikhosi yomkhosi wokugubha umhlaba wonke - okusho ukuthi asisekho isikhathi esingcono sokuqothula lelo pasipoti bese siqala ukuhlola! Ngenkathi isigamu esisenyakatho somhlaba sidonsa imimese yazo efudumele futhi sihlala phambi komlilo odlubulayo, labo abaseningizimu bamukela imikhono emifushane, izinsuku ezinde kanye nesimo sezulu esifudumele. Noma ngabe usesimweni sokumiswa kwewayini ehlanganisiwe nezimakethe zikaKhisimusi, noma ufuna indlela yokuphunyuka ebhishi ezindaweni ezishisayo uzoba nezinkumbulo zokuphila konke futhi ubuyise ekhaya izipho ezingcono kakhulu zikaKhisimusi.
NgoKhisimusi ozungeze nje ekhoneni, yimaphi la amadolobha amahle obhekisa kuwo? Hlela iholide lakho likaKhisimusi nabathandekayo bakho.
Ake ngenze umsebenzi wakho ube lula futhi ngikubonise okuhlangenwe nakho okwenziwe ngaphandle komhlaba okuzokwenza ufune ukushiya yonke into futhi uhambe manje!
Ukuthi ufuna ukuchitha isikhathi sikaKhisimusi eziqhingini ezimanzi elangeni Fiji noma uhlangabezana nobusika obumhlophe kuma-meccas afana I-New York, sizibhalise mathupha izindawo eziphezulu zokuya kulesi sikhathi samaholide - noma ngabe yini i-ajenda yakho.
Ukuthi uhlala ekhaya noma ukhetha eyodwa yalolu hambo lukaKhisimusi womndeni, ekugcineni imayelana nokuba ndawonye!
Siphinde sazise idolobha lakho olithandayo lapho ungathanda ukugubha khona uKhisimusi kulo nyaka emazwini angezansi!
Thola izindawo ezinhle kakhulu zikaKhisimusi bese ubhuka ihhotela lakho nendiza yakho ngentengo engcono kakhulu.
Sifisela wena uKhisimusi Omnandi kanye Nonyaka Omusha omuhle.
Ukuchitha isikhathi sikaKhisimusi ezweni lapho lungagidingi khona kuyinto eyehlukile. Ngokungafani namazwe wobuKristu / bama Katolika lapho imigwaqo igcwele amalambu nezihlahla ezigcwele izipho, ungabona kuphela umhlobiso omncane esikhungweni sezitolo noma, ngisho nomtholampilo, ubhekise kubavakashi. Yidla isidlo sakho sasemini sikaKhisimusi obheke emanzini aluhlaza okwesibhakabhaka oLwandle i-Andaman futhi usebenze noma ikuphi ngokweqile ngokuhamba esihlabathini esine-powder-soft, noma ugxume ngomkhumbi uyohlola emanzini.
"UKhisimusi omhlophe ohlale uphupha ngakho" esiqhingini seqhwa nomlilo - i-Iceland. Iqhwa likhanya ngaphansi kwezibani ezibenyezelayo ze-Jólasveinar eziyishumi nantathu, izinguqulo zase-Icelandic zikaSanta Claus. Futhi uma unenhlanhla, isibhakabhaka sizoshintsha siluhlaza ngenxa yethonya le-aurora borealis. Gqoka izingubo zangaphansi ezishisayo, udle isobho le-lobster bese uphuza newayini elibunjiwe.
Uma kukhona indawo lapho kugujwa khona ngempela ukhisimusi yiPoland. Amadolobha ane "Jarmark" yendabuko, izimakethe zikaKhisimusi ezinamalambu nezitolo ezithengisa amaswidi endawo. Ihambisana neqhwa, elifika unyaka nonyaka. Kulezi zimakethe ungaphuza i- “grzane wino” (iwayini elicwengiwe) noma i- “grzane piwo” (ubhiya oshisayo onezinongo) zombili iziphuzo ezifanele ukulwa nebandayo nokungena esimweni sokugibela sikaKhisimusi. Ungakwazi futhi ukunambitha i- "makowiec" (i-pastry yembewu yasePoland) ne "piernik" (isinkwa se-ginger).
Umuzwa wakamuva kakhulu wokushintshela ubusika obusika bokushiswa yilanga esigqokweni sikaKhisimusi. Ukuqasha, amabhakithi e-cocktail ngisho nokugxuma kwe-bungee, ngoKhisimusi? Wonke umuntu kufanele, okungenani kanye, achithe ukhisimusi phesheya kwezilwandle. ”
UKhisimusi ogwini lwase-Australia. Kuyinto entsha enjalo, ulalele izingoma zikaKhisimusi elangeni elikhazimulayo, futhi une-BBQ esikhundleni sokugaya ukudla kwakusihlwa! Ukubuka okwenzelwa ngezansi kusuka endaweni ethile yetafula lapho selishonile ilanga.
Sebenzisa christmas suti yokubhukuda ebhishi. UKhisimusi kunokufana nephathi enkulu ebhishi - eline-BBQ nezihlahla zesundu ezihlotshisiwe esikhundleni se-Advent ezolile.
Abantu base-Australia balengisa izingxenyana eminyango yabo yangemuva futhi kwesinye isikhathi baphume ngokhisimusi beyocula ngoKhisimusi. Abantu futhi bahlobisa izindlu nezingadi zabo ngezihlahla zikaKhisimusi kanye nezibani zikaKhisimusi. Omakhelwane kwesinye isikhathi baba nemincintiswano emincane ukubona ukuthi ubani onombukiso omuhle kakhulu wokukhanya. Omakhelwane bavame ukuvakasha bodwa ukubheka imibukiso ekhanyayo ebusuku. Kwesinye isikhathi ukukhonjiswa kukhishwa ekuqaleni kukaDisemba 1st.
Abantu base-Australia futhi bahlobisa izindlu zabo ngamaqoqo 'kaKhisimusi Bush', isihlahla somdabu sase-Australia esinamaqabunga amancane aluhlaza nezimbali ezinemibala kakhilimu. Ehlobo izimbali ziphenduka ubomvu obumnyameni obujulile phakathi nenkathi yamasonto (ngokuvamile ngeviki likaKhisimusi ku Sydney).
Isiteji Sokubuyela Esikhathi Ngesikhathi Emaphiramidi E-Giza. Imibhoshongo yaseGibhithe ingumbono ongabonakala.
Umlando omangalisayo, isiko lakudala nobuhle be-rustic - leyo ngamaPiramidi aseGibhithe ngawe. Ngenkathi i-Great Pyramid of Giza, yakhelwe uFaro Khufu futhi edume kakhulu kunabo bonke, zinike isikhathi ukuthola iMastaba yaseSeshemnufer IV engaphansi. Inegumbi lokungcwaba elingaphansi komhlaba futhi.
Uzokwazi ukuthi, le ndaba kaKhisimusi ilula impela, inezinkanyezi ezikhanyayo namakhosi e-3 awela ugwadule. Uzothola ukwazi futhi ukuthakazelisa ukuhlangana kokuphila kukaKhisimusi ngendlela efana ncamashi noKhisimusi wokuqala! ”
EGibhithe mayelana ne-15% yabantu bangamaKristu. Yibona kuphela ingxenye yabantu abagubha ngempela uKhisimusi njengomkhosi wenkolo. Iningi lamaKristu aseGibhithe lingeSonto LamaCopt Orthodox futhi banamasiko ahlukile ngoKhisimusi. USuku lukaKhisimusi alugujwa ngomhla ka-25th ngo-December kepha ngo-7th Januwari (njengase-Ethiopia nangamaKristu angama-Orthodox aseRussia naseSerbia).
Inyanga yamaCopt eholela kuKhisimusi ibizwa ngokuthi iKiahk. Abantu bacula izingoma ezikhethekile zokudumisa ngoMgqibelo ebusuku ngaphambi kwenkonzo yangeSonto.
Ukungena ngaphakathi eYurophu
Ziphathe ngesipho esimnandi: ithikithi lokuphasa lomhlaba jikelele le-interrail!
Uzobona izintaba ezinamaqhwa nezimakethe zikaKhisimusi ezimangazayo ezimangalisayo ezenziwe ngempahla eyenziwe ngesandla yendabuko namaswidi amnandi. Amadolobha ahlotshiswe ngokuphelele ngamalambu kaKhisimusi, ama-rinks eqhwa nezihlahla zikaKhisimusi, imigwaqo ekhanyiswe kahle, imakethe kaKhisimusi kuwo wonke amakhona, umculo, imindeni ejabule nephunga lokudla okumnandi emoyeni!
Uma ufuna indawo yokuphumula nokuphumula ngemuva konyaka omatasatasa, umbala nezinxushunxushu zaseNdiya kungenzeka zingafikeleli engqondweni. Cabanga futhi! ILush Kerala, eseningizimu yetropiki yaseNdiya, ijabulela impilo ehlukahlukene ezweni lonke. Beka izinyawo zakho phezulu emphemeni wesikebhe sakho sendlu njengoba ugwedla ngasemithanjeni yaseKerala, uphinde uvuselele indawo yokubuyisa impilo emahlathini asehlathini, uhlanganyele kokunye okusanda kudla kwasezweni, futhi ugeze unyaka omatasa emanzini ashubile ase-Arabhiya Ulwandle. Uma ufuna enye indawo ozokhala kuyo ngonyaka omusha, yibhekise eFort Kochi ukuze uthathe umbala we-Cochin Festival, iviki elinomdlandla lokugubha ekupheleni kukaDisemba.
Esikhundleni sokuba nezihlahla zendabuko zikaKhisimusi, kuhlotshiswe isihlahla sikabhanana noma semango (noma noma yini abantu abangayithola bayihlobisa!). Kwesinye isikhathi abantu basebenzisa amaqabunga emango ukuhlobisa amakhaya abo.
ENingizimu India, amaKristu ajwayele ukubeka izibani ezincane zobumba ezivuthayo ophahleni ophahla lwamakhaya abo ukukhombisa omakhelwane babo ukuthi uJesu ungukukhanya komhlaba
E-Romania, imikhosi kaKhisimusi naphakathi nobusika igcina kusukela nge-20th ngo-December kuya ku-7th Januwari. I-20th yilapho abantu begubha uSuku luka-St Ignatius. Kuyisiko ukuthi uma umndeni ugcina izingulube, kubulawa umuntu ngalolu suku. Inyama evela engulube isetshenziswa ekudleni kukaKhisimusi.
Usuku lukaSfantul Nicolae (St Nicholas) lugujwa mhlaka 6th Disemba. Kusihlwa se-5th Disemba izingane zihlanza izicathulo noma amabhuzu bese zizishiya ngasemnyango nginethemba lokuthi uSfantul Nicolae uzozishiyela izipho ezincane! USfantul Nicolae angabizwa nangokuthi 'Moş Nicolae' (Indoda endala uNicholas) futhi yize egujwa ngoDisemba, akuyona ingxenye yemikhosi kaKhisimusi! Isiko lithi uma ihloka ngoDisemba 6th, uSfantul Nicolae unikine intshebe ukuze ubusika buqale.
Imikhosi kaKhisimusi iqala ngempela ngoKhisimusi, i-24th, lapho sekuyisikhathi sokuhlobisa isihlahla sikaKhisimusi. Lokhu kwenziwa kusihlwa sangoKhisimusi. NgesiRomania, u-Eva kaKhisimusi ubizwa ngokuthi 'u-Ajunul Craciunului'.
UKhisimusi wendabuko waseRomania: chitha ubusuku nabangane uhambe endlini ngendlu ucule ama-carols kaKhisimusi. Kuzo zonke izindlu abantu balinda abahambi ngokudla futhi I-țuică, utshwala bendabuko baseRomania. Ngokuyisisekelo uzochitha ubusuku uhlabelela omakhelwane, uhamba emakhazeni, udla futhi uphuza esitobhini ngasinye. Ungahlala kuze kube yi-6 noma i-7 am kepha asikho isikhathi sokulala ukuze uphumule: ngosuku lukaKhisimusi, i-25th, ngemuva kwesidlo sasekuseni, wonke umuntu uya ukuhambela umndeni. Kuyakhathaza, kepha kuyamangalisa ngempela!
UKhisimusi eYurophu yisikhathi samasiko asendulo anakho konke ukuncipha. Uxolo ngokuhlephula kuwe kubahambi, kepha awukaze uwazi isikhathi samaholide uze uwazi nge-Weihnachtsmarkt yaseJalimane. Phakathi kwezitebele zemakethe enothuli lweqhwa ezithengisa amathokheni enziwe ngezandla, izihlahla zomsayiphu ezihlotshiswe ngemihlobiso, nephunga lesinamoni le-glühwein, uthando lwenkathi yamaholide luphila ngempela.
Njalo ngonyaka ngesikhathi sikaKhisimusi, indawo ezungeze iKhathedrali neHholo Ledolobha igcotshwa ngemikhosi. Lonke idolobha liguqulwa laba yipharadesi elincane lemibala namalambu, imisindo yomkhosi owucwebezelayo, kanye nephunga lokuthuthumela. Uma ungumthandi womculo ophakeme, uzothanda le ndawo. Kuyo yonke inkathi yomkhosi, kugcwala izitaladi zezidlela zokudla ezidabukisayo, ezinjengamazambane amaPotato, amaPrincen, amakhekhe kaKhisimusi namabhisikidi. Uzothola nezinto ezinhle kakhulu kwezobuciko nezikebhe emafashini anemibala. Njalo ngonyaka le ndawo ifakaza izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingama-1.5 ezifika zizothokozela umcimbi.
Uma wena phakathi nenkathi yomkhosi, iphunga elinamandla le wayini eshisiwe lizokushaya khona lapho. Lapho-ke umculo omnandi kaKhisimusi uyohamba usiya kuwe usakaza injabulo. Into elandelayo oyaziyo, izibani ezinqwabelene zizokhanyisa impilo yakho! Kuhle ukubhekana nokuhlakazeka kwezimakethi nokuphathwa kwendabuko kweSaxon.
IVienna yaziwa ngomusa nobuhle obufaka lapho igubha uKhisimusi. Kuzwakala njengomlingo uma useVienna ngalesi sikhathi sonyaka. Imigwaqo namaphahla kugcwele izitolo ezinkulu zikaKhisimuzi, amakhekhe anendawo yokudlela emibalabala, kanye namalambu acwebezelayo ahlobisa ubuhle bokwakhiwa kwaleli dolobha. Ungagxila ezindabeni ezintsha ezisanda kubhakwa eVienna's Christ mosalmarkt, zama isandla sakho (noma izinyawo zakho) e-skating skiking eRathausplatz, vakashela iMyuziyamu yeqhwa, noma ube yingxenye yamakhonsathi kaKhisimusi odumile.
Uthathwa njengenye yezimakethe zakudala zikaKhisimusi hhayi eYurophu kuphela kodwa emhlabeni wonke, iSalzburg Christ mosalmarkt yaziwa ukuthi isuselwa emasikweni ayo amadala wobudala kanye namasiko. Ususela emuva ngekhulu le-15th, iSalzburg isebenza njengelinye lamadolobha endabuko anesizinda esingokomlando esiqinile kulabo abazilungiselela enye yezindawo ezinhle kakhulu zokuchitha isikhathi sikaKhisimusi eYurophu.
Iqhwa eligcwele phama, izitini zokhuni, izigqoko zoboya obumnandi, izibiliboco ezidonsayo, kanye nokuhlobisa okwenziwe ngesikhathi samanje kuchaza izimakethe zaseTallinn ngalesi sikhathi sonyaka. Imikhosi yabo kaKhisimusi yaminyaka yonke ibathole idumela lokuba ngomunye wemakethe kaKhisimusi ejabulisa kakhulu futhi eyazisa kakhulu kulo lonke elaseYurophu. Izitebele ezinhle zokubumba zigcwele izimpahla zobuciko ezenziwe ngezandla kanye nobucwebe bendabuko. Ama-zoo ama-Mini anezilwane ezithandekayo agcina izingane zimatasa ngenkathi abadala bengaya ezitolo zabo zokuthenga. UTallinn uzizwa njengomlingo omsulwa ngesikhathi sikaKhisimusi.
I-Prague inikeza umbono we-Gothic Fairyland ngesikhathi sikaKhisimusi. Ukwakhiwa okuhle kwedolobha kunikeza isizinda esiphelele nesikahle kakhulu salo mkhosi omnandi ogcwele iphunga le wayini ehlanganisiwe, izitolo ezinemibala egqamile nemihlobiso. IMakethe kaKhisimusi yasePrague ifakwa izingulule ezinhle kakhulu zokhuni zigcwele izimonyo zendabuko ezinjengamakhekhe asanda kubhakwa nosawoti, izinto zobuciko ezenziwe ngabazingcweti, nemihlobiso emihle yesihlahla sikaKhisimusi. Umuzi wonke ukhanyiswe ngamalambu, umculo nezigcawu zokuzalwa, umoya weqiniso kaKhisimusi.
Okokugcina kepha hhayi okuncane; akukho okudlula kuthandekayo lwePrague uma kukhulunywa ngezindawo ezinhle kakhulu zokuchitha isikhathi sikaKhisimusi eYurophu. Ishaye izimakethe zesibili ezindala nezindala, iPrague inemakethe enhle kakhulu futhi enhle kunazo zonke kaKhisimusi kulo lonke elaseYurophu. Njengoba inezinto ezithandwayo ezidumile, yonke imigwaqo igqamile futhi yonke imigwaqo icwebezela kunanini ngaphambili, ukugubha uKhisimusi ePrague kuzizwa kungumkhosi.
Uma ungaphakathi Hungary ngesikhathi samaholide wasebusika bese uqinisekisa ukuthi uvakashela i Budapest UKhisimusi Fair kanye noMkhosi Wasebusika okwenzeka eVörösmarty Square. Lokhu kuzoba okuhlangenwe nakho okuhlukile kuwe. Indawo enhle kakhulu esezandleni zeBudapest ishintsha ibe yindawo yemikhosi egcwele izitolo zokhuni, izibiliboco zendabuko nezigaba zokuzijabulisa zasendaweni. Uma uyisitolo sokudla, kunconywa ukuthi uzame amakhukhi wezinyosi enziwe ngezindlela zokupheka zendabuko zaseBudapest, isinamoni, newayini eliminyene eliminyene. Iphunga lalezi zitolo zokudla lizokuyengela ngokuzenzakalelayo esigcawini semakethe.
Ukusuka ekugibeleni i-Streetcar uye e-skating e-ice rink eBudapest Park, iBudapest isebenza njengenye yezindawo ezikhangayo nezihamba phambili zokuchitha isikhathi sikaKhisimusi eYurophu. Ngemikhosi emihle efana nokuya enhlanganweni yamaphakathi kwamabili eSt Stephen Basilica ekubeni yingxenye yombukiso wendabuko waseHungary Folk Show, iBudapest ngeke ishiye itshe lingavunyelwe ukukubonga ngeminikelo yalo yemikhosi.
Imakethe kaKhisimusi eBrussels ihlala isikhathi esingaphezu kwenyanga. Imakethe igcwele izitolo ezinkulu ezinhle ezinikeza izinto zokwenziwa kwendabuko nezibiliboco, inkundla yemikhosi enemincibisholo yokugibela, kanye ne-ice rink yesikebhe esithile. Kepha okususa ububanzi bumuthi omkhulu kaKhisimusi ozungezwe umbukiso wokukhanya nomsindo. Enye yezindawo ezinhle kakhulu zokusebenzisa amaholide akho kaKhisimusi.
AmaBruges azwakala ngokuthokozela kukaKhisimusi futhi nakanjani akwehlisela emgqeni weenkumbulo ngokukusiza ukuzwa umuzwa ofudumele waseChristmas njengoba wawusengumntwana. Iphunga elihlwabusayo le-waffles efudumele esanda kubhakwa igcwalisa imigwaqo yaseBruges kanye namalambu aqhakaza izinganekwane kuwo wonke amabhilidi amakhulu enza iKrisimesi ibonakale njengehholo. Iqhwa elimhlophe lengeza ingemuva elihle emikhosini nasemikhosini. Ungakhuphuka ugibele inqola eqhutshwa amahhashi ukuthatha uhambo lwaleli dolobha elihle likaKhisimusi.
Sesha ezinye zezipho ezinhle kakhulu zomndeni wakho nabangane? Yiya kwesinye sezimakethe ezinkulu zikaKhisimusi eziqhutshwe eBrussels ngaphakathi kwesakhiwo sePray Flagey. Thenga eminye yemikhiqizo yezandla ehamba phambili njengezikhumbuzo ngabadwebi abahamba behla bevela ezindaweni ezifana neFrance, iHungary, Germany nokunye.
I-Graz izokushiya ufakwe ngesikhathi sikaKhisimusi. Idolobhana libonakaliswa ngamalambu othando emigwaqweni ne-ice rink yokuhamba ngezinyawo. Izimakethe, ikakhulukazi, zibukeka ziqhakaza zibheke ngemuva kwasemuva kwamalambu omkhosi acwebezelayo edolobha. Izimakethe zinezitolo ezinkulu zendabuko zemikhiqizo eyenziwe ngobuciko, izimonyo ezisanda kubhakwa, nezibiliboco zasendaweni. Isiphuzo esidumile kakhulu sendawo, i-Feuerzangenbowle, siza kakhulu emakhazeni abilayo. Noma kukhona okuthile ezinganeni futhi ngesimo se-carousel.
Isithwathwa sifika kanye ngesikhathi sikaKhisimusi esimboza amashifa amakhulu amadolobha ngombala omhlophe nokwakha i-ambiance enhle yomkhosi omuhle kakhulu. Imigwaqo emikhulu yamadolobha ifakwe amalambu okuhlobisa anezela emoyeni kaKhisimusi. Ngaphezu kwalokho, ukuxinana okukhulu kwabahwebi nezingcweti ezimakethe kuncoma imikhosi yemikhosi. Isiphuzo sabo sendabuko, uGlögi, sikhonzwa ngokuzwana okufudumele. I-Ice Park muva nje iye yathandwa kakhulu phakathi kwabavakashi kanye nabasendaweni ngokufanayo ngeqhwa leqhwa. Balandela nemicikilisho yendabuko yokugubha uSuku lweSt Lucia kanye nesiko leTiernapojat. Izitolo zenza imisebenzi yezandla, imihlobiso kaKhisimusi, izibani ezinhle, izibiliboco zendabuko neziphuzo ezivuthayo.
Uma ukwazi ukubhekana nobusika, kungani ungangeni konke ubalekele endaweni eyiqiniso ebusika? IFinland Lapland iyizwe elimangalisayo lase-Arctic; amahlathi emvula agqunywe uthuli, izimpophoma zamanzi agijimayo, ama-reindeer amnene kanye nehlane elikhulu, elimhlophe okuqinisekisiwe ukuthi likushiye ungaphefumuli (futhi hhayi ngoba kubanda nje).
Bopha imichilo yamabhuthi akho okuhamba endle bese udabula indlela ngokusebenzisa ama-taigas, ugoqoze ama-huskies athile bese uhlangabezana nokujaha kwenja yangempela ebunjiwe, ubuke ilanga lishona ngaphezu kweziqongo ze-pristine, bese ujabulele isidlo se-Sami sendabuko noma i-sauna ngenkathi isibhakabhaka sidansa kanye ne-Aurora Borealis. Gcina iso lendoda enenwele enenwele egqoke isudi ebomvu ezungeze i-25th nayo - amahlebezi wokuthi umhlangano ka-Santa ulapha!
Bona ukuthi uSanta Claus uhlala kuphi. INorway iye yafana neNyakatho izibani. Ungachitha isikhathi uyothenga ezimakethe ezikhanyayo, ube nekhofi leFinpa yesindebe futhi ukhokhele uSanta ukuvakasha. Njengengxenye yalesi simo esiyingqayizivele, thatha uye eSpitsbergen - indawo lapho kunamabhere amaningi kunama-polar kunabantu!
I-Rovaniemi, inhloko-dolobha yaseLapland, ifakaza izinyanga ze-6 zeqhwa lonyaka zenza le ndawo yaba indawo enhle yokugujwa kukaKhisimusi. Ukuheha okukhulu kwaleli dolobha phakathi nezinyanga zasebusika yidolobhana laseSanta Claus, okusho ukuthi yiKhisimusi unyaka wonke eRovaniemi. Baphethe imibukiso ebonisa umoya nesiko likaKhisimusi nelikaSanta Claus. Ungahlanganyela ngisho nemibukiso yezandla ezenziwe ngobuciko. Futhi uma uvakashela ehlathini le-Elves, uzothola umbono omncane wokudonswa kukaSanta ehlathini.
Uyemukelwa ezweni laseSanta! Ukugubha kwenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuchitha isikhathi sikaKhisimusi eYurophu kuletha izinto eziningi ezimangazayo ohambweni lapho kuzoba khona okuhle kakhulu edolobheni laseRovaniemi. Ikhaya elisemthethweni laseSanta Claus elisenkabeni yeLapland, izihambi zingavakashela futhi zibingelele eSanta eSanta Village elapha e-Arctic Circle. Lokhu kungenzeka ngazo zonke izinsuku ze-365 zonyaka, futhi asihleki!
Uma uzimisele ukujabulela ukhisimusi wesimanje noma wendabuko, khona-ke iStockholm iyindawo efanelekile ukuba lapho. Iqhwa eliyimpuphu linikeza i-ambiance enhle yemikhosi. Ungavakashela nje amaMakethe kaKhisimusi wase-Old Town, ube ne-gingerbread ne-glögg, bese uyothenga imikhiqizo yobungcweti ngaphansi kokuhlobisa okugcwele izinkanyezi okugcwele kulo lonke idolobha. Izitebhisi ezincane ezibomvu nakanjani zizokubamba ukunaka kwakho futhi kumele zivakashelwe. Banikeza amaswidi endabuko, inyama yomhlanga, usoseji obhemayo nenyama ye-elk kanye nezinye izinto eziningi ezikhethekile zikaKhisimusi.
Uma ngabe uthenga ezimakethe ezinhle zikaKhisimusi noma ulandisa ezinye zezithelo ezi-gingerbreads ezisanda kusungulwa, asikho sezikhathi zakho zikaKhisimusi eziya eYurophu eziqediwe ngaphandle kokuthola okuhle kakhulu emhlabeni wanamuhla kanye nangokwendabuko eStockholm. Vumela izibani ezinhle ziqondise kwezinye zezindawo ezihlotshiswe kahle ukuvakashela eSweden.
Jabulela isidlo sakusihlwa e-Eiffel tower eParis. Phila impilo yaseParisian ngokudla kwaseFrance e-Eiffel Tower
Gubha ukuvakasha kwesikhumbuzo nesakhiwo sodumo lwesakhiwo sothando, i-Eiffel tower eParis, nokudla okungajwayelekile kwaseFrance. Kunezindawo zokudlela ezimbili ezikhona lapho ezinikeza amakhono waseFrance.
I-Paris, idolobha eletha bukhoma ubuciko, imfashini namasiko e-gastronomy, kungenye indawo enhle kaKhisimusi eYurophu. Imakethe ethandwayo yokubiza ngemicimbi yezitolo ngalesi sikhathi sonyaka. Izimakethe zigcwele chalets enhle ezwakalisa isimo sikaKhisimusi. Uzomangaza imihlobiso ehlukahlukene kaKhisimusi nemikhiqizo yobuciko etholakala kulezi zimakethe. Uma kukhulunywa ngokudla, ushizi ojwayelekile waseFrance, iwayini, ne-champagne kufakwa ngokuziqhenya emakethe yezokugaya. Futhi umbono omnandi wedolobha ebusuku ngokuqinisekile uzokunikeza izinkumbulo ezingalibaleki.
Ufuna ukwazi indawo enhle yokwazisa imikhosi yakho kaKhisimusi? Kufanele kube yiStrasbourg, izandla phansi! Okucatshangwa ukuthi uyiNhlokodolobha KaKhisimusi, akuwona neze ukuthi ungaphuthelwa ukuthola izimakethe zikaKhisimusi zeminyaka engu-400 ezenza iStrasbourg ingelinye lamadolobha amahle kakhulu aseKhisimusi ngoKhisimusi.
Ukunikeza ukuthenga kukaKhisimusi ku-Oxford Street, izimakethe eziwubukhazikhazi eziphuza newayini ebunjiwe, umkhosi omkhulu wase-Wonderland obuseHyde Park nokunokwenzeka kukaKhisimusi omhlophe, iLondon isixuku esikhulu esijabulisayo maqondana nokuhambela kuka-Yuletide.
Uma ungenasikhathi esanele sokuxoxa futhi uthathe isinqumo nomndeni wakho ngokuthi ungasichitha kuphi isikhathi sikaKhisimusi eYurophu khona-ke iLondon yiyona ndlela elula. Ukugubha uKhisimusi eLondon kuyinto eyingqayizivele ngokwayo. Idolobha lonke liguquka libe yi-Wonderland ebusika nge-skating yokuba ngomunye wemisebenzi ethandwa kakhulu ngesikhathi sikaKhisimusi. Ukusuka ekuthengeni kuya ekuphakamiseni ukudla okufudumeza inhliziyo, futhi kusuka ekhonsathini ye-carol kuya emigubhweni yobusuku baphakathi kwamabili, eLondon kufanelekile ukuchitha isikhathi sikaKhisimusi.
USanta ubonakala ngesikebhe esisheshayo ezindaweni eziningi zokungcebeleka zaseFiji ngaphezulu kwezinsuku zikaKhisimusi namaholide kanye nezinsizakalo ze-carol konke kwenzeka ngaphansi kwemisebe yelanga efudumele.
Njengokungathi Izingadi zaseSingapore ngeBay light show azanele, idolobha likhanya kakhulu ngoKhisimusi njengoba imigwaqo iguqulwa ibe yindawo ebabazekayo ebusika. Shayela u-Orchard Road ukuze uthole amalambu, ukufaka kanye nethuba lokuthwebula isithombe ngeSanta, noma indawo yokudlela yokudla ukuze unambitha zonke izinhlobo zokukhethekile zemikhosi yomkhosi.
Izibani zomgwaqo zikaKhisimusi ezidume kakhulu ziseRockefeller Center eNew York lapho kunesihlahla esikhulu sikaKhisimusi esinomphambili weqhwa lomphakathi phambi kwawo ngaphezulu kukaKhisimusi nonyaka omusha.
Ngamathuba ayo okuthenga ngoKhisimusi, indawo eneqhwa, izimakethe zamaholide kanye nokwehla konyaka omusha ka-New Year's Eve at Madison Square, eNew York kunzima ukuyishaya ngesikhathi samaholide.
UKhisimusi eGeneva ulingana nezibani ezinhle zikaKhisimusi. ILake Geneva lonke ligcwele izitolo, izitebele kanye namalambu ayinkulungwane njengengxenye yamasiko kaKhisimusi waseYurophu. Futhi kwabadliwayo, ababheke phambili ezindaweni ezinhle kakhulu ongazisebenzisa ngoKhisimusi eYurophu, ungabheki njengeGeneva ephethe imakethe egcwele ababonisi bokudla bangaphambi kukaKhisimusi abavela kuwo wonke umhlaba.
Okufanele Ukuhlangenwe Nakho: Kufanele uhambele iGenève Marché International de Noel endaweni kaPa de Fusterie, hlola imakethe kaKhisimusi eLake Geneva, uyothenga eRue du Marché, naseRue de Rive, nokuningi.
I-Ice Skating e-Amsterdam, eNetherlands. Ngokungafani namanye amazwe aseYurophu, imikhosi e-Amsterdam iqala ngoNovemba. Indawo enkulu yokubuthana yeMyuziyamu isiguqulwa ibe idolobhana eliwumlingo likaKhisimusi lapho umuntu angakujabulela ngokugcwele ngokuphelele kwezinye izimakethe zikaKhisimusi ezinhle kakhulu. Ukusuka ekujabuleni uhambo lokuhamba ngesondo elijabulisayo likaFerris liye ekudleni okungapheli, umculo, iziphuzo kanye nezigcawu zokudansa, i-Amsterdam ngempela ingenye yezindawo ezinhle kakhulu ongazisebenzisa ngoKhisimusi eYurophu.
Idolobha langempela likaKhisimusi kuzo zonke izinzwa zalo, iCopenhagen ilandela amanye amasiko amahle ngesikhathi semikhosi kwenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuchitha isikhathi sikaKhisimusi eYurophu. Lonke idolobha limbozwe izibani eziya emaphethelweni futhi umuntu angahlala ezimakethe zikaKhisimusi ezinkulu kuzo zonke izindawo ezisezindongeni nasezindaweni zedolobha. Ukusuka ekubuyiseleni ukudla okuhle kakhulu basemgwaqweni nokuvakashela ifektri endala yamaswidi, iCopenhagen inokuningi kakhulu kunalokho okuhlangabezana iso.
Uma udinga ukubheka amathikithi okuya lapho, igumbi ozohlala kulo, itekisi elizokuthatha, amathikithi e-museum we-museum ukuze ungalindi emigqeni,… nokunye okuningi
Ungahlola njalo nezinsizakalo zethu zokuhamba.
Noma yini oyenzayo futhi lapho uya khona yiba no-Merry Christmas!
Merry Christmas ngo Izilimi ezahlukene
I-Arabic Eid Milad Majid (عيد ميلاد مجيد) Okusho 'Idili Lokuzalwa Elikhazimulayo'
IsiDashi / Flemish Vrolijk Kerstfeest
Frohe Weihnachten waseJalimane
UMandarin Sheng Dan Kuai Le (圣诞 快乐)
IsiCantonese Seng Dan Fai Lok (聖誕 快樂)
IsiFinland Hyvää joulua
Isi-Greek Kala Christouyenna noma i-Καάά
I-Bengali Shubho bôṛodin (শুভ বড়দিন)
I-Hindi Śubh krisamas (शुभ क्रिसमस)
U-Israyeli - isi-Chag Molad Sameach (isi-Hebrew)
okusho ukuthi 'Umkhosi Omuhle Wokuzalwa'
I-Italian Buon Natale
Meri Kurisumasu waseJapan (noma 'Meri Kuri' ngamafuphi!)
IsiPutukezi Feliz Natal
Russian s rah-zh-dee-st-VOHM (C рождеством!) Noma